Dood: Sidee looga xoroon karaa cabsida? Cabsan waxaa dareen diidmo ah, waa karbaash la saamaynta ba'an sida kuwa dagaalka ah, cuqdad ah in burburiyey naftooda oo dhan
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 24, 2019 00: 35 No Comments
Kuwo badan ayaa ku jira cabsida: cabsida nolosha, cabsida wax qabashada, cabsida fashilka, cabsida dadka kale, cabsida ka hadlida fagaarayaasha(Agorafobi)cabsida berrito, cabsida dhimashada. Si aad naftaada uga xoroobo cabsida, waxay kugu filan tahay inaad baraarujiso. Markaa bilow inaad kor u qaaddo wacyigaaga iyo inaad kor u qaado dadka kale, halkii aad ka cabsan lahayd.
Waxa aan aragno oo aan rumeyno adduunkan ayaa ah milicsiga Qalbiga iyo Ruuxda Aadanaha. Caawinta cabsidaada iyo nabarrada, waxaadna caawineysaa bogsiinta adduunka iyo waddankaaga, magaalada, tuulada, qoyska, saaxiibka(E)s. Ku noolow sida aad rabto inaad u noqoto, sameyso waxaad jeceshahay, raadi waxa aad rabto, ma aha waxa aad cabsi qabtid: waxay ka dhigaysaa farqiga oo dhan!
Nov29 08: 57